MIUI Theme ပြုလုပ်နည်း အပိုင်း(၃) « XMS-MMF
MIUI Theme ပြုလုပ်နည်း အပိုင်း(၃)
Credit to ကို တောငျပျေါ သား ကိုတောင်ပေါ်သား
Fonts နှင့် Lockscreen ပြုလုပ်ခြင်းmiui ရဲ့ lockscreen ဆိုတာက lockstyle, lockscreen နဲ့ miwallpaper ပါဝင်အပိုင်းကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာ၁။Lockscreen ရဲ့ နာရီ၊ သီချင်းပြီးတော့၂။Lock style ( v5 ~ v6 )၃။Miwallpaper ဆိုတာက ရိုးရိုး wallpaper ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး၊ အချိန်ပိုင်း ပုံ ၁ ပုံချင်းကို အော်တိုပြောင်းစေလိုတာလား၊ သို့မဟုတ် homescreen ကို ၂ ချက်ထိပေးချင်းဖြင့် ပြောင်းစေလိုတာလား၊ homescreen မှာ ပုံကို animation နဲ့ပေါ်စေချင်တာက အစရှိပါတယ်။
( အလင်းတန်း ) lockscreen ကိုနမူနာထားပြီးရှင်းပြပါ့မယ်။miui v5 စတိုင် lock ပုံစံပါ။lockscreen ဖိုဒါထဲမှာ၁။ advance folder ( သီချင်း၊ နာရီ၊ ရာသီဥတု စတဲ့ မိမိထည့်ချင်တဲ့ အပိုင်းတွေပါဝင် )၂။ theme_values.xml ( အချိန်၊ icons တွေပြသတဲ့အပိုင်း )ပါဝင်ပါတယ်။နာရီကို မြန်မာလို ပြုပြင်ပြီးလဲထည့်သုံးနိုင်ပါတယ်။widget နာရီပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပိုင်းနဲ့ တူတူပါပဲ။advance folder ထဲက မိမိသုံးလိုတဲ့ date, music icons , music image background စတာတွေကို size အကြီး၊ အသေး ပြုလုပ်ပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်။(က) config.xml(ခ) manifest.xml ဒီ ၂ခုလိုအပ်ပါတယ်။ဒါက နမူနာပါ။(က) config.xml<Config><Group text=”Display date/time”><CheckBox text=”Display date/time” summary=”Display date and time on lockscreen” id=”datetime” default=”0″/></Group></Config>
(ခ) manifest.xmlစာကရှည်တော့ နမူနာ mtz ထဲမှာပဲဝင်ဖတ်ပါ။
<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?><MIUI_Theme_Values><bool name=”config_show_status_bar_battery_for_keyguard”>true</bool><bool name=”config_show_status_bar_carrier_for_keyguard”>true</bool><bool name=”config_show_status_bar_date_for_keyguard”>false</bool><bool name=”config_show_status_bar_notification_for_keyguard”>true</bool><bool name=”config_show_status_bar_status_for_keyguard”>true</bool><bool name=”config_show_status_bar_time_for_keyguard”>true</bool><bool name=”config_lock_screen_battery_animation_horizontal”>false</bool></MIUI_Theme_Values>
ပြီးရင်icons, image တွေနဲ့ advance foldertheme_values.xml ၂ ခုကိုပေါင်းပြီး zip ပြုလုပ်ပေးပါ။ရလာတဲ့ zip ကို lockscreen ဆိုပြီး rename ပေးလိုက်ပါ။
သုံးမယ့်ပုံကို miwallpaper ( folder )0.jpg ကနေ 5.jpg အထိထည့်ပေးပါ။အဓိကလိုအပ်တာက manifest.xml ပါ။နမူကတော့အောက်မှာပြထားပါတယ်။home screen မှာ2ချက်ထိရင် auto ပြောင်းပေးတဲ့ပုံစံပါ။ဘောင်ခတ်တဲ့ bg.png ကိုတော့ဖြုတ်ထားပါတယ်။
<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?><MiWallpaper version=”1″ frameRate=”1280″ screenWidth=”720″ displayDesktop=”false”>
<Button x=”0″ y=”0″ w=”720″ h=”900″ ><Triggers><Trigger action=”double”><VariableCommand name=”bg” expression=”(‪#‎bg‬+1)%6″ persist=”true”/></Trigger></Triggers></Button>
<Group name=”wapple” x=”0″ y=”0″><Image x=”-‪#‎wallpaper_offset_x‬*720″ y=”0″ src=”0.jpg” visibility=”eq(#bg,0)”/><Image x=”-#wallpaper_offset_x*720″ y=”0″ src=”1.jpg” visibility=”eq(#bg,1)”/><Image x=”-#wallpaper_offset_x*720″ y=”0″ src=”2.jpg” visibility=”eq(#bg,2)”/><Image x=”-#wallpaper_offset_x*720″ y=”0″ src=”3.jpg” visibility=”eq(#bg,3)”/><Image x=”-#wallpaper_offset_x*720″ y=”0″ src=”4.jpg” visibility=”eq(#bg,4)”/><Image x=”-#wallpaper_offset_x*720″ y=”0″ src=”5.jpg” visibility=”eq(#bg,5)”/></Group>
<Image x=”‪#‎screen_width‬/2″ y=”‪#‎screen_height‬/2″ align=”center” alignV=”center” src=”bg.png” /></MiWallpaper>
fontsfonts ( folder ) ထဲကို DroidSansFallback.ttf နဲ့ Roboto-Regular.ttf ဆိုတဲ့ မိမိကြိုက်တဲ့ ဖောင့်ကို rename ပေးပြီးထည့်ပေးပါ။
နောက်ဆုံးအပိုင်းအနေနဲ့1. wallpaper ( folder )ထဲကို မိမိသုံးမယ့်ပုံကို (default_lock_wallpaper.jpg ) ပုံ ၁ ပုံထည့်ပေးပါ။2. fonts (folder)ထဲကို ( DroidSansFallback.ttf နဲ့ Roboto-Regular.ttf ) ထည့်ပါ။3. preview ( folder ) ထဲကို( preview_fonts_0.pngpreview_lockscreen_0.jpg ) ထည့်ပေးပါ။4. miwallpaper ထည့်ပါ။5.lockscreen ထည့်ပါ။6. description.xmlအားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ zip လုပ်ပါ။ရလာတဲ့ zip ကို mtz ပြောင်းပေးပါ။mtz ကို theme store ကနေ import from sdcard မှတဆင့် သွင်းပြီး၊ apply ပေးလိုက်ပါ။ခုပေးထားတဲ့ theme နမူနာကို lockscreen မှာ နာရီပေါ်အောင် Customize > lockscreen > local မှာ ဝင်ပြီး show on ပေးဖို့တော့လိုပါတယ်။homescreen wallpaper ကတော့စပေါ်တဲ့ wallpaper ကအနက်ရောင်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ screen ကို ၂ ချက်ထိပေးရင် auto ပြောင်းပေးပါလိမ့်မယ်။
နမူနာ mtz download link